Ohere Marketingzụ ahịa Dị Comtụnanya Na-abịa IoT | Martech Zone
Saturday, April 7, 2018 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
Otu izu ma ọ bụ karịa gara aga, a gwara m ka m kwuo okwu na mmemme mpaghara na Internet Ihe. Dị ka ngalaba-ọbịa nke Dell Luminaries pọdkastị, M na ton nke ikpughe Edge Mgbakọ na nkà na ụzụ ọhụrụ nke na-ama na-ewere udi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọọ maka ahia ahia n'ihe banyere IoT, enwere okwu n'eziokwu abụghị ọtụtụ mkparịta ụka n'ịntanetị. N'ezie, enwere m ndakpọ olileanya ebe ọ bụ na IoT ga-agbanwe mmekọrịta dị n'etiti onye ahịa na azụmaahịa ahụ.
Kedu ihe kpatara IoT ji agbanwe?
Enwere ọtụtụ ihe ọhụụ na-abịa n'eziokwu nke ga-agbanwe IoT:
5G Ikuku ga - eme ka bandwidth gbapụrụ ọsọ ga kpochapụ njikọ ndị nwere eriri n'ime ụlọ na azụmahịa. Ule emezuola ọsọ karịa 1Gbit / s n’ebe dị anya nke ruru kilomita 2.
Miniaturization nke ihe omuma ihe na ikike ike igwe na-abawanye ga-eme ka ngwaọrụ IoT nwee ọgụgụ isi na-enweghị mkpa maka oke ike ọkọnọ. Kọmputa ndị pere mpe karịa penny nwere ike iji ike anyanwụ na / ma ọ bụ ikuku na-akwụ ụgwọ na-agba ọsọ mgbe niile.
Security a na-etinye ọganihu n'ime ngwaọrụ kama ịhapụ ndị ahịa na azụmaahịa ka ha chọpụta onwe ha.
The ọnụahịa nke IoT ngwaọrụ na-eme ka ha dị ọnụ ala. Ọganihu na sekit na-ebipụta ga-eme ka ụlọ ọrụ nwee ike ịmepụta ma mepụta nke ha IoT ọcha - na-enyere ha aka iji ebe niile. Ọbụna mbipụta OLED a na-agbanwe agbanwe dị n'akụkụ nkuku - na-enye ụzọ iji gosipụta ozi n'ebe ọ bụla.
Yabụ kedu ka ahịa a ga - esi emetụta ya?
Chee echiche banyere otu ndị ahịa siri chọpụta ma nyocha ngwaahịa na ọrụ ndị azụmaahịa nyere n'ime otu narị afọ gara aga.
Ahịa - Otu narị afọ gara aga, onye ahịa ahụ mụtara naanị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ozugbo site na mmadụ ma ọ bụ azụmaahịa na-ere ya. Ahịa (nke a kpọrọ aha ya) bụ ikike ha nwere ịre na ahịa.
Mgbasa mgbasa ozi - Ka mgbasa ozi dị, dịka igwe obibi akwụkwọ, ụlọ ọrụ azụmaahịa nwere ohere iji kpọsaa karịa olu nke ha - n'obodo ha na gafere.
Media Media - Ulo oru mgbasa ozi bilitere, na-enye ndi oru ahia ikike iru otutu puku mmadu ma obu kwa nde mmadu. Direct mail, telivishọn, redio me onye ọ bụla nwere ndị na-ege ntị nwere ike inye nnukwu ego iji ruo ndị na-ege ntị. Ọ bụ ọrụ gọọmentị, ụlọ ọrụ mgbasa ozi tolitere na nnukwu elu na uru. Ọ bụrụ na achụmnta ego chọrọ inwe ọganihu, ha ga-arụ ọrụ site n'ọnụ ụzọ mgbasa ozi a na-akwụ ụgwọ.
Digital Media - Ntaneti na soshal midia nyere ohere ohuru na ebelata ihe omuma ya. Ndị ụlọ ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ ugbu a n'okwu ọnụ ahịa site na ọchụchọ na ọwa mmekọrịta iji wulite ma jikọta ndị na-ege ntị. N'ezie, Google na Facebook jiri ohere wuo ọnụ ụzọ uru ndị ọzọ ga-esote n'etiti azụmahịa na onye na-azụ ahịa.
Oge Ọhụrụ nke Ahịa: IoT
Oge ọhụụ a na - ere ahịa fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n’arụ anyị nke na - atọ ụtọ karịa ihe ọ bụla anyị hụburu. IoT ga - enye ohere dị egwu anyị na - ahụtụbeghị mbụ - ohere maka azụmaahịa gafere uzo niile wee nwee nkwukọrịta, ọzọ, na atụmanya na ndị ahịa.
N'ime ihe ngosi, ezi enyi na Onye ọka iwu IoT John McDonald nyere ọhụụ dị egwu banyere ọdịnihu anyị dị nso. Ọ kọwara todays ụgbọala na ike Mgbakọ komputa ha nwere. Ọ bụrụ na agbanyere ha, ụgbọ ala ha na ndị nwe ha nwere ike ịkparịta ụka ugbu a, na-eme ka ha mara na ha na-akpa ákwà na ike gwụrụ Arsgbọ ala nwere ike ịgwa gị ka ị were ọpụpụ na-esote wee tụọ gị nso na Starbucks arest ọbụlagodi ịtụ ihe ọ yourụ drinkụ kachasị amasị gị maka gị.
Ka anyị were ya n'ihu. Kedu ihe ma ọ bụrụ na, Starbucks nyere teknụzụ IoT nke na-agwa ụgbọ ala gị okwu, ọnọdụ ya zuru ụwa ọnụ, ihe mmetụta ya, na iko ahụ na-eme ka ị mara na a nyere iwu ihe ọ drinkụ drinkụ gị ma kwalie na ụzọ ọzọ. Ugbu a, Starbucks anaghị adabere n'ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ma soro onye na-azụ ahịa kwukọrịta, ha na ndị ahịa nwere ike ịkparịta ụka.
IoT Ga-anọ ebe niile, na ihe niile
Anyị ahụworị ebe ụlọ ọrụ mkpuchi na-enye ego ma ọ bụrụ na itinye ngwaọrụ n'ime ụgbọ ala gị nke na-agwa ndị ụlọ ọrụ ihe ndị a na-anya ụgbọala gị. Ka anyị nyochaa ohere ndị ọzọ:
Ngwaọrụ mkpuchi ụgbọ ala gị na-ekwupụta ntụle ịkwọ ụgbọala dị irè karị dabere na omume ịkwọ ụgbọala gị, ebe iji zere ihe ọghọm, ma ọ bụ ụzọ ụgbọ mmiri iji nyere gị aka ịchekwa.
Igbe Amazon gị nwere ngwaọrụ IoT nke na-agwa gị okwu iji gosi gị ọnọdụ ha ka ị nwee ike izute ha ebe ha nọ.
Companylọ ọrụ ọrụ ụlọ gị dị na mpaghara na-etinye ngwaọrụ IoT n'ụlọ gị na-enweghị ọnụ ego na-achọpụta oke mmiri ozuzo, mmiri, ma ọ bụ pests - na-enye gị onyinye iji nweta ọrụ ozugbo. Ikekwe ha na-enye gị ihe ị ga-agwa ndị agbata obi gị.
Child'slọ akwụkwọ nwa gị nyere gị IoT ịbanye na klaasị iji nyochaa omume, nsogbu, ma ọ bụ onyinye nwa gị. Nwedịrị ike ịgwa ha okwu ozugbo ọ bụrụ na nsogbu adị ngwa.
Onye na-ere ahịa ụlọ gị na-etinye ngwaọrụ IoT n'ụlọ gị niile iji nye njem nlegharị anya na nke dịpụrụ adịpụ, nwee ike izute, kelee, ma zaa ajụjụ maka ndị nwere ike ịzụrụ gị oge ọ bụla n'ehihie ma ọ bụ n'abalị mgbe ọ dị mma maka ndị abụọ ahụ. Ngwaọrụ ndị ahụ na-gbanyụọ na-akpaghị aka mgbe ị nọ n'ụlọ ma ị nye ikike na usoro ihe omume gị.
Onye na-ahụ maka ahụike gị na-anapụta gị ihe mmetụta sensọ dị n'ime ma ọ bụ nke mpụga nke ị na-eyi ma ọ bụ gbarie nke na-enye data dị mkpa na Dọkịta. Nke a ga - enyere gị aka izere ụlọ ọgwụ kpam kpam, ebe enwere ihe egwu nke ibute ọrịa ma ọ bụ ọrịa.
Ugbo ala gị na-enye ngwaọrụ IoT nke na-ekwupụta nsogbu nchekwa nri ma ọ bụ wepụta anụ, akwụkwọ nri, ma mepụta gị naanị oge. Ndị ọrụ ugbo nwere ike ibute ụzọ dị iche iche na-ebu amụma na-agaghị ere na megastore nri na obere ego nke ọnụahịa. Ndị ọrụ ugbo na-eme nke ọma na ụmụ mmadụ na-echekwa na oriri na-enweghị isi nke nnyefe na nkesa.
Nke kachasị mma, ndị na-azụ ahịa ga-achịkwa data anyị na ndị nwere ike ịnweta ya, otu ha ga-esi nweta ya, yana mgbe ha nwere ike ịnweta ya. Ndị ahịa ga-eji ọlyụ zụọ data mgbe ha matara na data na-enyeghachi ha uru na na a na-edozi ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Na IoT, azụmaahịa nwere ike iwulite mmekọrịta tụkwasịrị obi na onye na-azụ ahịa ebe ha maara na data ha agaghị ere. Sistemụ onwe ha ga-ahụ na edobere data ahụ ma nwee nchekwa. Ndị ahịa ga-achọ ma mmekọrịta yana nnabata.
Yabụ, kedu maka azụmaahịa gị - kedu ka ị ga - esi gbanwee mmekọrịta gị na atụmanya na ndị na - azụ ahịa ma ọ bụrụ na ị nwere njikọ chiri anya ma nwee ike ịgwa ha okwu? Ikwesiri ịmalite iche banyere ya taa… ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị enweghị ike ịsọ mpi n'ọdịnihu dị nso.
Tags: 5gOgeiotnkwukọrịta ahịa